» नागरिक एपबारे जान्नुपर्ने ३ कुराहरु
१५ माघ २०७७, बिहीबार २०:४८
चन्द्र घलान, मकवानपुर, १५ माघ । नेपाल सरकारले परिक्षणका रुपमा ल्याएको नागरिक एपको अहिले सर्वत्र चर्चा छ । नागरिक एपको डाउनलोड दर बढेको खबरबाटै यो निक्कै लोकप्रिय बन्दै गएको अनुमान लाउन सकिन्छ । नागरिक एपमा खाता खोल्दा धेरै नेपाली नागरिकहरुले फोन नम्बरका कारण अनि नागरिकता नम्बर नमिलेका कारण सास्ती भोगेका छन् । तर चिन्ता नगर्नुहोस् त्यसको सजिलो उपायहरु यो भिडियोमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ । यस भिडियो सामग्रीमा नागरिक एपमा अकाउन्ट बनाउँदा आईपर्ने समस्याको समाधानसहित उपयोगी ३ वटा जान्नैपर्ने कुराहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–
१) नागरिकताको समस्या कसरी हल गर्ने ?
तपाईहरुमध्ये धेरैले नागरिक एपमा खाता खोल्दा नागरिकता नम्बर हाल्ने गर्नुभएको छ । तर धेरैले नागरिकता नम्बर नमिलको जानकारी पाउँछन् । नागरिकता नम्बर नमिल्दा ‘नागरिकता नम्बरको विवरण गृहमन्त्रालयको रेकर्डमा भेटिएन’ भन्ने सूचना आउँछ । यस्तो हुनुको मुख्य कारण हाम्रो नागरिकता नम्बरको डिजिट सिस्टम हो । तपाईहरुले याद गर्नुभएको होला हाम्रो नागरिकता नम्बरमा केही नम्बरपछि ड्यास हुन्छ, कसैकोमा बाई हुन्छ अनि पूराना नागरिकताहरुमा त अंक र अक्षर पनि समावेश हुन्छन् । उदाहरणका लागि म.३२७ । सम्भवत यो सिस्टमकै कारण हाम्रो नागरिकता नम्बर गृहमन्त्रालमा भएको नागरिकतासँग मिल्दैन । हुन त यो सम्भावनामात्रै हो । यो समस्या आउँदा के गर्ने त ? पहिलो हो यो समस्या आउँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ र उहाँहरुले भन्नुभएबमोजिम गर्नुपर्छ । तर हामीसँग त्यो भन्दा पनि अर्को सजिलो उपाय छ । नागरिकता नम्बरबाट खाता खोल्न नसकिएमा पासपोर्ट वा तपाईको मतदाता परिचय पत्रबाट सजिलै खाता खोल्न सकिन्छ । तपाईसँग पासपोर्ट भएमा अझ धेरै सजिलो हुन्छ । किनकि पासपोर्टबाट यो समस्या सजिलै हल हुन्छ र खाता खुल्छ ।
२) मोबाईल नम्बर अरुको नाममा छ भने के गर्ने ?
नागरिक एप प्रयोग गर्नका लागि तपाईको मोबाईल नम्बर आवश्यक पर्छ र त्यो तपाईकै नाममा दर्ता भएको हुनुपर्छ । अहिले धेरै जसोले आफ्नो सिम आफ्नै नाममा नभएका कारण नागरिक एप चलाउन सकेका छैनन् । यसो हुनुमा हामीले आफन्तको नाममा सिम निकाल्नु प्रमुख कारण देखिन्छ भने नेपाल टेलिकमका ग्राहकहरुले नेपाल टेलिकमकै प्राविधिक त्रुटिबाट पनि यस्तो समस्या भोगिरहेका छन् । कुनै समयमा आफ्नै नामबाट निकालेको सिममा पनि अरुकै नाम देखाएपछि यो समस्या भएको हो । तपाईले चलाईरहनुभएको सिम तपाईको नाममा छ कि छैन त्यो पत्ता लगाउनका लागि यदि तपाई एनटिसीको सिम चलाउनुहुन्छ भने स्टार ९२२ ह्यास डायल गरेर हेर्नसक्नुहुन्छ । तपाई एनसेलको सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने स्टार ९९६६ ह्यास डायल गरेर हेर्नसक्नुहुन्छ । साथै एनसेलको मोबाईल एपबाट पनि सिधै हेर्नसक्नुहुन्छ । यदि तपाईको नाममा छैन भने तपाईले एनटिसीको कार्यालयमा गएर जसको नाममा छ उसको नागरिकताको प्रतिलिपि र तपाईको नागरिकताको प्रतिलिपि बुझाएर तपाईको नाममा सिम दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल टेलिकमको केन्द्रिय कार्यालयले तपाईले ६ महिनाभन्दा बढी चलाएको सिमलाई आफ्नो नाममा गर्न सक्नुहुन्छ भनेता पनि ग्राहक सेवा कार्यालयमा त्यस्तो सुविधा पाईदैन । तपाईले जसको नाममा सिम छ उसको नागरिकता बोकेरै जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै एनसेलको भने यदि तपाईको नाममा सिम छैन तर तपाईले ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि चलाईरहनुभएको छ भने केही नम्बर भेरिफाई गरेर तपाईको नाममा सिम दर्ता गर्नसक्नुहुन्छ । यदि यी सबै कुरा गर्न झन्झटिलो छ र तपाईको सिम जसको नाममा छ त्यो मान्छे सम्पर्कमा छैन भने तपाईले सजिलैसित एनटिसी वा एनसेलको नयाँ सिम लिएर नागरिक एप प्रयोग गर्नसक्नुहुन्छ ।
३) नागरिक एप चलाउनका लागि पैसा पर्छ ?
नागरिक एप चलाउनका लागि अहिले त पैसा पर्छ तर नेपाल सरकारले नागरिक एप प्रयोग गर्दा खर्च हुने मोबाइल डेटा निःशुल्क गर्ने योजना बनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एपका लागि आवश्यक डेटा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । तर निशुल्क भएता पनि एप डाउनलोड गर्दाको समयमा भने डेटाबाटै काटिन्छ । एप चलाउन थालेपछि भने कुनै शुल्क लाग्नेछैन । आदरणीय दर्शकविन्द, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । तपाईलाई नागरिक एप प्रयोग गर्न समस्या छ भने टेक्निकल सहयोगी च्यानलमा अपलोड भएको एप प्रयोग गर्ने र खाता खोल्ने सम्बन्धी भिडियो हेर्नुहोस् । भिडियोको लिंक यसै भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा र भिडियोको अन्तिममा राखिएको छ । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
अलिशा अटोमोटिभ हेटौँडाका लागि कर्मचारी आवश्यकता